Mikarataka – Imahaka
imahaka	dans Uncategorized	 avril 3, 2014 207 Words
Rehefa lalana dia feno lavadavaka eto andrenivohitra indrindra amin’izao fotoam-pahavaratra izao. Miteraka fahasimbana ho an’ny fiara izany faharatsian-dalana izany. Mandeha ny tsena ho an’ireo mpanamboatra « Silent bloc ». Tafiaka 10 hatramin’ny 15 isan’andro ny isan’ireo mpanjifa raha toa ka 5 isan’andro izany teo aloha.
Tsy mandeha ny tsena ho an’ireo mpivarotra sasany, ny mifanohitra amin’izany kosa ny an’ireto mpanamboatra « silent bloc » ireto. Mitombo isa ny olona tonga mividy na manamboatra izany. Antony, mitarika fahasimban’ny fiara ireo lavadavaka eto andrenivohitra.
Ilaina fahaizana araka izany ny fikirakirana azy ireto, indrindra ny fampiasana ity masinina ity. Masinina vita gasy, kanefa mahavita tsara ny asa rehetra mahakasika ny « silent bloc » no ampiasain’ireto mpivarotra ireo. Manaraka tsara ny fenitra raha ny filazan’izy ireo ny zava-bita, mafy tsara ary mora ihany koa.
Rehefa mpampiasa fiara ka manana piece simba na hosoloina dia manantona azy ireo avokoa. Ny asa kosa ,tsy mifidy fa izay mahakasika ny fiara rehetra ka ilaina izany dia ataon’izy ireo daholo.
2000 ar ny vidiny farany ambany ary mahatratra 5 alina ariary kosa ny farany lehibe indrindra amin’ireto « silent bloc » ireto. Efa maro ankehitriny ireo mpanamboatra izany eto andrenivohitra, saika ahitana azy ireo daholo eny amoron-dalana, raha tsy hilaza afa-tsy 67 ha, Nosy Be, Andavamamba.
Mikarataka ny Malagasy